Qarax Gaari Looga Gubay Ciidamada Kenya Oo Ka Dhacay Gobolka Laamu. – Bogga Calamada.com
Wararka ka imaanaya gobolka Laamu ee dalka Kenya waxay sheegayaan in maanta barqadii qarax xoog leh lala eegtay ciidamo ka tirsan difaaca dowladda Kenya xilli ay ku socdaalayeen deegaan ka tirsan gobolkaas oo ka mid ah gobollada ay ku xooggan yihiin ciidamada Kenya iyo kuwa reer galbeedka.
Qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso waxay Mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo ciidamo ah oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaannada Kayunga iyo Shangani oo ka tirsan gobolka Laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haysato dowladda Kenya.
Ilo wareedyo masuul ah waxay soo wariyeen in qaraxa uu si gaar ah u haleelay gaari BG ah oo ay ka buuxeen ciidamo badan oo Kenayan ah waxaana halkaas ka dhashay khaaare baaxad leh oo soo gaaray ciidamada millatariga xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Nairobi.
Macluumaadkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in qaraxaas aadka u xooggan uu gabi ahaan burburiyay gaariga BG ah waxaa sidoo kale goobta ku leday oo dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay dhammaan ciidamadii la socday gaariga.
Ciidamada shabaabul Mujaahidiin waxay dhowr jeer oo hore qaraxyo khasaare badan dhaliyay ka fuliyeen gobolka Laamu ee dalka Kenya inta badan qaraxyadan ayaana ka dhaca goobaha muhiimka ah ee ay ku dhaqdhaqaaqaan ciidamada millatariga dowladda cadowga ah ee Kenya.